20 Siyaabood Oo Xor Ah Oo Loo Kordhiyo Koontadaada Instagram | BehMaster
Bogga ugu weyn/Warbaahinta bulshada/20 Siyaabo oo Fantastik ah oo Xor ah oo lagu Horumariyo Koontadaada Instagram
20 Siyaabo oo Fantastik ah oo Xor ah oo lagu Horumariyo Koontadaada Instagram
Iyada oo boqolaal milyan oo isticmaaleyaal firfircoon maalin kasta ah, Instagram waa mid ka mid ah aaladaha ugu fiican ee bilaashka ah ee lagu gaadho suuqa bartilmaameedka ah. Laakiin kaliya ma geli kartid palooza dhajinta oo aad filan karto natiijooyin. Haa, dhejinta joogtada ah waa muhiim, laakiin waa inay noqotaa qayb ka mid ah istaraatiijiyad weyn oo kor loogu qaadayo akoonkaaga Instagram. Inta badan isticmaalayaasha yaqaana astaantaada goobtan, kalsoonida badan ee aad ku kasban karto iyo inta ka hartay dadaalka suuqgeynta ayaa noqon doona.
Waxa ugu fiican ayaa ah in ay jiraan siyaabo badan oo kor loogu qaado akoonkaaga Instagram-ka dhamaantood waa bilaash. Markaa qoraalkan, waxaan kugu socon doonaa 20 xeeladood oo noocaas ah. Waxaan dabooli doonaa:
Sida kor loogu qaado profile kaaga kanaalada kale
Sida loo isticmaalo dhisidda xiriirka si aan caadi ahaan kor ugu qaadno akoonkaaga
Astaamaha asalka ah ee Instagram ka caawin kara kor u qaadida astaantaada
Hababka nuxurka xambaarsan ee lagu heli karo indho badan akoonkaaga
Xataa waxaan tuuray dhowr xeeladood oo gunno ah [ma aha bilaash] haddii aad miisaaniyad leedahay. Iyadoo aan loo eegin istaraatiijiyadu, waxaad ka heli doontaa dulucda guud ee qoraalkan inay tahay tan kor u qaadida akoonkaaga Instagram ee daawadayaasha saxda ah. Midda kale, maxay taraysaa in dad aan ku wanaagsanayn ganacsigaaga ay kula socdaan oo ay kula hawl galaan?
Sababaha kor loogu qaado ganacsigaaga Instagram
Kor u qaadida meheraddaada guud ahaan waa wax aan caqli-gal ahayn, laakiin qoraalkan aawadood, aan ka hadalno sababta kor u qaadida astaanta ganacsiga ee Instagram-ka gaar ahaan ay mudan tahay wakhtigaaga. Waa kuwan waxa aad ku fulin karto adiga oo kor u qaadaya IG-gaaga:
Soo-gaadhista Instragram waa abka labaad ee bilaashka ah ee lagu soo dejiyo dukaanka app-ka Apple (Source: Apple)
Gaar Instragram waa goobta saddexaad ee ugu caansan warbaahinta bulshada adduunka, oo leh 1 bilyan isticmaale firfircoon bishii iyo 500 milyan isticmaaleyaasha firfircoon maalin kasta (Source: Instagram).
Ku xidh dhagaystayaashaada: Instragram waa dhex dhexaadnimada ugu badan ee shabakadaha bulshada, 50.9% dumar ah ilaa 49.1% lab ah, taas oo macnaheedu yahay in xayaysiisyadaadu ay faa'iido u leeyihiin isku xirka labada qaybood ee dhagaystayaasha bartilmaameedka ah (Source: Statista).
Macaamiisha: Iyada oo saldhig isticmaale oo weyn, waxaad si kalsooni leh u soo gabagabeyn kartaa inaad gaareyso boqolkiiba badan ee suuqa bartilmaameedka Instagram. Iyo gudbinta qiimaha, kasbashada kalsoonida, iyo dhisida xidhiidhada abka sidan aadka loo isticmaalo ayaa kaa caawin doona inaad soo jiidato oo aad haysato macaamiil badan.
Kahor intaadan bilaabin xayeysiinta akoonkaaga Instagram
Aynu marka hore hubinno in laguu habeeyey si aad sida ugu wanaagsan uga faa'iidaysato kor u qaadida akoonkaaga Instagram. Tani waxay ku lug leedahay lahaanshiyaha astaanta ganacsiga, ka dhigista mid guud, iyo dhamaystirka noolahaaga.
1. Hubi inaad leedahay akoon ganacsi oo Instagram ah
Kahor intaadan bilaabin inaad dad badan ku soo jiidato akoonkaaga Instagram, hubi in koontadaada Instagram ay tahay a profile ganacsiga. Haddii aad ganacsigaaga u isticmaalayso akoon Instagram-ka gaarka loo leeyahay, u beddelashada koontada ganacsi runtii waa mid aad u fudud. Dhinaca midig ee shaashadda gurigaaga ka dooro astaanta qofka, ka dibna shaagagga ku yaal geeska midig ee sare ee shaashadda. Tani waxay ku geyn doontaa shaashadda "Options" halkaas oo aad ka dooran karto "Beddel Profile Business."
2. Buuxi macluumaadkaaga
Ahaanshaha goob muuqaal ah oo noocan oo kale ah, profiles Instagram aan dhamaystirnayn waa kuwo aan soo jiidasho lahayn; ilaa heer ay ka fiicnaan lahayd in la haysto yar dadka ogaanaya profile dhamaystiran halkii ay lahaan lahaayeen dheeraad ah dadka imanaya mid aan dhamaystirnayn. Ku dhamaystir profile kaaga ganacsiga, iku dar faahfaahinta faa'iidada leh ee ku saabsan ganacsigaaga, isticmaal sawir muuqaal tayo sare leh, oo hubi in bio Instagram-kaga uu ku qoran yahay codka astaantaada. Sidoo kale, ku dar xiriirinta degelkaaga ama bogga degitaanka ee loo qoondeeyay bio-gaaga.
3. Naftaada ka dhig mid muuqda
Ma horumarin kartid akoonkaaga Instagram oo ma kasban kartid taageerayaal badan haddii ay ku heli waayaan! Markaa laba jeeg kaliya ku samee si aad u hubiso in profile-kaagu yahay mid guud. Haddii kale, kaliya kuwa horeba kula socday ayaa arki kara qoraalladaada.
Hagaag, hadda oo aan haysano waxyaabaha aasaasiga ah ee la daryeelay, waa waqtigii lagala hadli lahaa sida kor loogu qaado koontadaada Instagram si wax ku ool ah, adoon bixinin dime.
Kor u qaad akoonkaaga Instagram-ka
Suuqgeynta dhijitaalka ah ma tixraacdo hal kanaal gaar ahaan. Istaraatiijiyad wax ku ool ah waxay shaqaaleysiisaa kanaalo badan hal mar, iyo iyada oo loo marayo is-waafajinta nuxurka, waxay abuurtaa nidaam isku dhafan oo isku dhafan si ay kuu keenaan natiijooyinka ugu fiican. Waa kuwan sida loo isticmaalo kanaalada suuqgeynta kale ee kala duwan si aad kor ugu qaaddo akoonkaaga Instagram-ka bilaash:
4. Email leh
Waxaa laga yaabaa inay ku caawiso in lagu daro astaanta warbaahinta bulshada ee aaladahaaga aadka loo isticmaalo ee cagta ee iimaylada suuq-geynta-ama xitaa saxiixaaga iimayllada caadiga ah. Tani dabcan si cad uma xayeysiiso akoonkaaga Instagram, laakiin waxay siinaysaa dhagaystayaashaada hal dhibic oo dheeri ah oo ay ku galaan astaantaada. Intaa waxaa dheer, waxaan qiyaasi lahaa inay jiraan qaybo gaar ah oo ka mid ah liiska emailkaaga kuwaas oo ah macaamiil daacad ah ama hogaamiyayaal aqoon sare leh, markaa fursadaha ay ku imaan karaan akoonkaaga Instagram mid ka mid ah emailskaaga ayaa badan.
Waxa kale oo aad diri kartaa iimaylo suuqgeyn ah oo si toos ah kor ugu qaadaya akoonkaaga Instagram. Haddii aad wado tartan, abaalmarin ama dhacdo, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad akhristayaasha ku toosiso astaantaada Instagram si ay uga qaybqaataan.
5. Boggaga internetka
Halkaa marka ay marayso, macaamiishu waxay filayaan astaamaha warbaahinta bulshada inay ku jiraan mareegaha ganacsiga, sida caadiga ah xagga hoose ee cagaha, markaa iska hubi inaad ku darto calaamadahaas iyo xidhidhka gacmahaaga. Intaa waxaa dheer, haddii ganacsigaagu uu aad ugu tiirsan yahay muuqaalada (sida sawirada ka hor iyo ka dib, muuqaal qurux badan, naqshadaha gudaha, iwm.); haddii aad tahay sawir qaade ama xitaa qorsheeye leh gallery; ama haddii aad ku leedahay quudinta badeecada Instagram-ka, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad lahaato bog halkaas oo quudintaada Instgram-ka ay ku dheggan tahay. Waa kuwan saddex siyaabood oo bilaash ah oo loogu xidhi karo boggaaga mareegaha iyo quudintaada Instagram:
Qaabka guntanka bilaashka ah ee Instagram u gaar ah haddii aad tahay qof aqoon u leh tignoolajiyada.
Plugins bilaash ah kuwa isticmaala WordPress, sida Burbur buufin.
Qalabka bilaashka ah sida EmbedSocial's Widget-ka Instagram-ka ee waligeed-free-free ee mareegaha
6. Iyadoo loo marayo shabakadaha kale ee bulshada
Haddii aad leedahay soo-socotayaal waaweyn ama heerarka ka-qaybgalka sare ee aaladaha kale ee warbaahinta bulshada sida Facebook, Twitter, ama LinkedIn, u isticmaal aaladahaan agab xayeysiis ah oo loogu talagalay akoonkaaga Instagram. Waxaad tan ku samayn kartaa adiga oo si toos ah u isticmaalaya CTA-yada, kor u qaadida isku xirka kaaga Bayoolaji Instagram, ama la wadaaga sawiradii ugu dambeeyay ee Instagram-ka iyo fiidiyowyada goobahaas. Maadaama dad badani ay ku firfircoon yihiin in ka badan hal shabakad bulsho, waxaad u badan tahay inaad ku qanciso qaar inay kugu raacaan Instagram sidoo kale.
Adeegso dhisidda xiriirka si aad u horumariso akoonkaaga Instagram
Xeeladaha hoose waa guul-guul sababtoo ah waxay kaa caawinayaan kor u qaadista akoonkaaga Instagram laakiin sidoo kale waxay dhisaan dareenka bulshada agagaarka sumaddaada waxayna siiyaan taageerayaashaada cod.
7. Ka bilow qoyskaaga iyo asxaabtaada
Tilmaamahan ayaa si gaar ah faa'iido u leh ganacsiyada yaryar ama kuwa maxalliga ah, ama kuwa hadda bilaabay suuqgeyntooda Instagram. La xidhidhiyaha qoyska iyo asxaabta waxay kaa caawin doontaa inaad hesho hawl-gal bilow ah, waxayna (rajo) aad ugu farxi doonaan inay kor u qaadaan akoonkaaga shabakadooda. Xitaa haddii aysan si toos ah u xayeysiin akoonkaaga, ka-qaybgalkooda profile-kaaga ayaa ka muuqan doona quudintooda iyo taageerayaashooda ayaa sidaas kugu ogaan kara.
8. Mudnaanta sii ka qaybgalka
Waxaa laga yaabaa in habka ugu wanaagsan ee kor loogu qaado akoonkaaga Instagram ay tahay ka-qaybgal dhab ah. Macaamiishu waxay jecel yihiin inay dareemaan in la maqlo, marka in badan oo aad dib ula falgasho faallooyinkooda, faallooyin badan iyo soo-gaadhsiin ayaa aad heli doontaa. Laakin ha noqon oo kaliya ka fal-celin ka-qaybgalkaaga; si firfircoon u like iyo faallo ka bixi qoraalada taageerayaashaada, dib u raac. Mid kasta oo ka mid ah hawlgelintan ayaa si caadi ah u kor u qaadaysa akoonkaaga Instagram isla markaana ay xoojinayso xidhiidhka aad la leedahay dhagaystayaashaada oo ay dhiseyso kalsoonida.
9. Codso oo wadaag macluumaadka isticmaaluhu soo saaray
Xogta isticmaaluhu soo saartay waxay kor u qaadi kartaa ka-qaybgalkaaga Instagram adigoo waliba kor u qaadaya ganacsigaaga. Ma jiro nooc ka wanaagsan oo ka kooban xayaysiis oo ka duwan kan macaamiisha dhabta ah. Waxaa dheer, markaad la wadaagto nuxurkooda, waxay u badan tahay inay dib ugu dhejiyaan taageerayaashooda si ay u arkaan, taasoo sii kordhinaysa gaadhistaada.
Waxyaabo badan oo ay soo saareen isticmaale ayaa u dhici doona si dabiici ah, laakiin sidoo kale si toos ah ayaad u codsan kartaa — iyada oo loo marayo loolan, tartan, ama hawl kasta oo fudud oo madadaalo leh. Tusaale ahaan, weydii macaamiishaada inay wadaagaan sawiradooda iyagoo isticmaalaya badeecada ay jecel yihiin, ama taageeraya arrin aad danayso. Gaar ahaan tartamada, istaraatiijiyadani waxay dhiirigelin kartaa (ama xitaa u baahan kartaa) kuwa raacsan inay calaamadeeyaan kuwa kale ee aan weli raacin akoonkaaga Instagram. Kaliya iska hubi in dadaalkaagu uu keeno inaad hesho taageerayaal xiiseeya ganacsigaaga.
Kaliya iska hubi in dadaalkaagu uu keeno inaad hesho taageerayaal xiiseeya ganacsigaaga.
17. Raac oo la fal gal dadka Instagram-ka saameeya
Ku socodsiinta iskaashiga wax-soo-saarka ayaa runtii kor u qaadi kara soo-gaadhistaada Instagram-ka, laakiin sidoo kale waxaad si fudud ula macaamili kartaa iyaga qaab kaalmaynaya sumaddooda isla markaana ku siinaysa inaad soo bandhigto. Kaliya ha jeclayn qoraaladooda; dib u dheji oo si fakar leh uga faallooda hab wax ku kordhinaya boostada ama wada hadalka. U hubso inaad wakhti qaadato si aad si buuxda ugu barato astaanta saameeyayaasha, dhagaystayaashu, iyo waxa ku jira inta badan shabakada si aad u hubiso inaad si buuxda u siman tahay.
Faa'iidada gunnada ah ee istiraatiijiyaddan ayaa ah in si joogto ah ula falgalka dadka saamaynta leh ay kaa caawin karto inaad la socoto macluumaadka warshadaha iyo isbeddellada caanka ah ee ku jira nichegaaga.
Isticmaal macluumaadka si aad kor ugu qaaddo akoonkaaga Instagram
Xudunta istaraatiijiyad kasta oo suuqgeyn dhijitaal ah oo wanaagsan ayaa ka kooban - wargelin, dhab ah, Mawduuc tayo sare leh oo wargelinaya, hawlgelinaya, oo qanciya baahiyaha macaamiishaada. Waa kuwan sida loogu daro suuq-geynta macluumaadka dadaalkaaga xayaysiinta ee Instagram.
10. Daabac qoraallo waxtar leh
Tani waa mid ka mid ah siyaabaha la isku dayay ee runta ah ee lagu horumarinayo akoonkaaga Instagram lacag la'aan-ama taa beddelkeed, ku dhiirrigeliso ganacsigaaga guud ahaan Instagram-ka. Waxyaabo soo jiidasho leh, xiiso leh, oo faa'iido leh ayaa siinaya isticmaalayaasha sabab ay ku raacaan. Waa kuwan qaar ka mid ah fikradaha iyo talooyinka nuxurka waxtarka leh:
Boostada blog-ga caadiga ah (ma aha typo): Tani waa a Instagram boostada ka kooban ciwaanka ama kooban oo kooban a blog ku dheji kadibna xiriirinta.
Qoraalo qoraal ah oo qaab-dheer: Ka soo saar dhibcaha muhiimka ah qoraalladaada blog-ka ee waxqabadka ugu sarreeya oo ku dar boostada Instagram oo leh muuqaal u dhigma.
Nuxurka ilo kale: Ku wadaag xisaabaadka warshadaha iyadoo loo marayo jaantusyo, garaafyo, iyo muuqaallo kale oo soo jiidasho leh, adigoo hubinaya inaad calaamadiso isha asalka ah.
Maskaxda ku hay in aanad mar walba u baahnayn inaad ku xidho shabakadaada fariimahaaga Instagram. Tani waa hab fiican oo lagu wado taraafikada shabakada, laakiin markaad ka fikirto tirada qoraalada ku jira quudinta taageerayaashaada ee ka kooban xiriiriyeyaasha, boostada tidbit fudud oo la dheefshiido waxay la mid tahay neefta hawo nadiif ah iyaga - wax ay qaadan karaan oo ay dareemaan dhamaystirka markay dhex wareegayaan quudintooda aan dhamaadka lahayn.
Boostada tidbit-ka ee la dheefshiido waxay u la mid tahay neefta hawo cusub oo loogu talagalay taageerayaashaada - wax ay qaadan karaan oo ay dareemi karaan dhammaystirka markay dhex wareegayaan quudintooda aan dhammaadka lahayn.
Waxaa laga yaabaa inaadan arkin kor u kac degdeg ah oo ku saabsan ka-qaybgalka ama kuwa raacsan habkan, laakiin waa qasab. Haddii aad si joogto ah u bixiso waxbarasho iyo macluumaad tayo sare leh waqti ka dib iyo codkaaga sumadda gaarka ah, koontadaada Instagram waa hubaal inay helayso sumcad adag iyo soo-socota la xidhiidha.
11. Ku dhaji sawirro soo jiidasho leh, oo tayo sare leh
Waan ogahay, tani maaha waxyiga dhulka duminaya. Laakiin lid ku ah caqiidada caanka ah, uma baahnid inaad noqoto sawir qaade xirfad leh ama aad haysato qalab qaali ah si aad u soo saarto sawirro soo jiidasho leh oo soo jiidasho leh Instagram-ka. Waxaa jira qalab badan oo bilaash ah oo sawir iyo tafatir muuqaal ah oo laga heli karo Instagram lafteeda iyo abka kale si ay kaaga caawiyaan abuurista indho-qabad, iyo sawirro tayo leh, sida Canva or Laydh.
Kristin DamstetterQuudinta firfircoon ee Instagram waxay caddaynaysaa in sawirada tayada wanaagsani ay ka fudud yihiin sidaad u malaynayso.
Tilmaanta Pro: Meheradaha qaarkood, waxa laga yaabaa inay ku caawiso inaad kaydiso quudkaaga joogtada ah sawiradaada tayada leh, alaabta gallery, iyo in ka badan canbaha dhajinta; iyo si aad u kaydiso macluumaadkaaga cayriinka ah, wakhtiga ku jira, iyo lama filaanka ah ee Sheekadaada Instagram, kaas oo aanu dhawaan dabooli doono.
12. Ku dhaji wakhtiga saxda ah
Waa muhiim inaad si joogto ah oo joogto ah ugu dhejiso Instagram, laakiin wax badan ma samayn doontid kor u qaadida akoonkaaga haddii aanad soo dhejinaynin waqtiyada saxda ah. "Waqtiga saxda ah" wuu kala duwan yahay iyadoo loo eegayo dhageystayaasha aad beegsaneyso, nooca ganacsiga, iyo in ka badan, markaa waxaad u baahan doontaa inaad xoogaa fikir ah geliso tan.
Tusaale ahaan, haddii suuqa aad beegsanayso uu ka kooban yahay maamulayaal badan, wakhtiga ugu fiican ee aad ku dhejin karto waxa laga yaabaa inay tahay shaqada xidhmaysa, agagaarka 5pm, ama inta lagu jiro safarkooda subaxnimo. Laakin haddii dhagaystayaashu ay ugu horrayn yihiin hooyooyinka carruurta yaryar, wakhtiga ugu habboon waxa ay u badan tahay in uu soo daahayo subaxda, marka ay carruurtooda dugsiga kaga tagaan. Tijaabi oo u fiirso falanqayntaada si aad u ogaato wakhtiga soo dhejinta ay waxtar u yeelan doonto horumarinta akoonkaaga Instagram.
13. Su'aalo ku weydii qoraaladaada
Isticmaalka qoraallo ama codbixin si aad u weydiiso su'aal ku habboon adiga niche waa hab fiican oo lagu kordhiyo ka-qaybgalka, lagu helo soo-gaadhsiin badan oo kor loogu qaado kobacaaga Instagram. Ka fakar su'aalaha ku raaxaysan doona in laga jawaabo ama mawduucyada muhiimka u ah dhagaystayaasha aad beegsanayso; ka fogow wax kasta oo shakhsi ama muran leh, maadaama ka qayb qaadashada ka dhalan karta ay qaadan karto waji fool xun.
Waxa kale oo aad su'aalo ku waydiin kartaa Sheekooyinka Instagram Highlights (waan heli doonaa kuwa dambe).
14. Had iyo jeer isticmaal #hashtags
Marka ay timaado horumarinta akoonkaaga Instagram, hashtags waa lama huraan. Isticmaal hashtagyada khuseeya qoraaladaada iyo Sheekooyinkaaga si aad uga caawiso in akoonkaaga uu soo baxo. Oo ay khusayso, waxaan ula jeedaa:
Hashtagyada goobta ku salaysan. Kuwani waxay kaa caawinayaan inaad dhisto wacyigelinta sumadda ee bulshada deegaankaaga, iyo si aad u hesho macaamiisha kuu dhow (ka fikir #bostonbrunch). ((Adiga oo ka hadlaya in ay ogaadaan macaamiisha dhow, ma waxaad ku jirtaa heerka ugu sarreeya ee suurtogalka ah ee Khariidadaha Google?))
Hashtagyada warshadaha gaarka ah. Hashtag-yadani waxa ay ka caawin karaan akoonkaaga Instgram-ka inay u soo baxaan dadka u dhow iyo kuwa fog ee laga yaabo inay xiiseeyaan nuxurka ganacsigaaga guud ahaan. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad dhisato maamulka goobtaada oo aad xitaa la xiriirto saameeyayaasha.
Hashtagyada caanka ah: Hashtagyada xiisaha leh sida #nofilter iyo hashtag hal abuur leh oo loogu talagalay maalmaha toddobaadka Way fiicantahay in lala isticmaalo hashtagyadaada la beegsaday. Qoraallada noocaan ah waxay ku siinayaan habab aad ku muujin karto codka summadaada gaarka ah waxayna kaa caawinayaan inaad kor u qaaddo dhinaca bini'aadamka ee ganacsigaaga.
Waxaad ku isticmaali kartaa ilaa 30 hashtags qoraaladaada, laakiin taasi macnaheedu maaha inaad tahay. U fiirso kuwa kor u qaadi doona akoonkaaga dhagaystayaasha saxda ah. Intaa waxaa dheer, boostada leh hashtags gazillion waxay noqon kartaa xoogaa xad dhaaf ah oo xitaa u soo baxda sidii quus. Waxaad had iyo jeer ku dari kartaa kaliya laba ama saddex boostadaada ka dibna faallo ka bixi boostadaada inta ka hartay hashtagyada aad rabto inaad isticmaasho - tani waxay kaa caawineysaa inaad hesho isla soo-bandhigid adiga oo sii wadaya qoraallada dhadhanka leh (iyo kuwa ka yaryar).
Waxaad ku isticmaali kartaa ilaa 30 hashtags qoraaladaada, laakiin taasi macnaheedu maaha inaad tahay. U fiirso kuwa kor u qaadi doona akoonkaaga xaq u dhagaystayaasha.
Adeegso astaamaha Instagram si aad kor ugu qaaddo akoonkaaga
Inta u dhaxaysa Sheekooyinka, Sheekooyinka Muhiimka ah, IGTV, iyo in ka badan, Instagram waxay leedahay astaamo badan oo ku dhex jira madal u gaar ah si ay kaaga caawiyaan dhisidda iyo kor u qaadida astaantaada. Waa kuwan dhowr xeeladood oo bilaash ah oo la isku dayo:
15. Si joogto ah ugu dheji Sheekadaada Instagram-ka
Sheekooyinka Instagram waa sida albamo yaryar oo loogu talagalay ganacsigaaga oo ka koobnaan kara sawirro, muuqaallo, dhejisyo, codbixinno, iyo wax ka badan. Nuxurku waxa uu dib u cusbooneesiiyaa 24-kii saacadoodba mar marka waa meel fiican oo lagu soo bandhigo waxa ka sii badan ee ceyriinka ah oo daah-furan ee caawinaya in ganacsigaaga laga dhigo mid la isku hallayn karo. Isticmaalayaashu waxay jecel yihiin Sheekooyinka Instagram-ka, markaa isticmaalka sifada si joogto ah ayaa ah daw ay akoonkaaga iskeed isu horumariso. Waxaad u isticmaali kartaa Sheekooyinka Instagram siyaabo kala duwan. Wixii fikrado ah, fiiri jabsiga Sheekada Instagram-kayaga.
16. Isticmaal sheekooyinka Sheekada Instagram-ka
Sheekooyinka Instagram Highlights waa ururinta macluumaadka aad ku dhejisay Sheekadaada Instagram-ka waagii hore. Sida caadiga ah waxaa loo yaqaan "albums" waxaana loo qaybin karaa qaybo kala duwan. Waxa aad u weyn oo ku saabsan Instagram Story Highlights waa in aysan u lumin sida Sheekooyinka; Waxay si joogto ah ugu nool yihiin astaantaada, oo hoos tagta qaybta bio-ga iyo korka quudintaada caadiga ah.
Waxaa jira siyaabo badan oo loo isticmaalo Instagram Story Highlights si kor loogu qaado akoonkaaga Instagram, sida:
La wadaag shaqadaadii u dambaysay ama cusboonaysiinta alaabtaada
Orod codbixin is dhexgal
Ka jawaab su'aalaha raacsan
Tilmaamaha casharrada alaabta
Ku dhawaaq iibka iyo qiimo dhimista
Muuji marag furahaaga macmiilka ugu fiican
Dhammaan kuwaas oo ka kooban tayo iyo nuxur faa'iido leh, hubinta hirgelinta istiraatiijiyadda #9 ee kore.
Isticmaalka IG Story Highlights si aad u soo bandhigto markhaatiyada.
17. Isticmaal IGTV
IGTV (Instagram TV) wuxuu u shaqeeyaa si la mid ah YouTube-ka iyo TV-ga caadiga ah, taas oo isticmaalayaashu ay ku dhex mari karaan kanaalada akoonnada ay jecel yihiin ama mawduucyada. Iyada oo waxa ku jira muuqaalku ay yihiin hab wax ku ool ah oo lagu gaadho dhegaystayaashaada, tani waa hab fiican oo aad in badan oo taageerayaasha fiidyowyada u janjeerta ugu soo rogaan akoonkaaga Instagram.
Waxa kale oo jirta shaqada ugu yar ee tan loo baahan yahay. Soo dejinta fiidyowga IGTV ee ugu horreeya waxay si toos ah u abuuri doontaa kanaalka gaarka ah ee astaantaada. Intaa waxaa dheer, waxaad dib u soo celin kartaa ama xitaa dib u soo diri kartaa fiidiyowyada Facebook iyo YouTube ee aad horey u abuurtay - adigoo ka soo hor jeeda qayb cusub oo ka mid ah Instagram-kaaga soo socda.
18. Isticmaal Instagram Live
Ku socodsiinta casharrada, aqoon-is-weydaarsiyada, iyo fadhiyada Q&A iyada oo loo marayo fadhiga Instagram Live waa hab kale oo weyn oo kor loogu qaado akoonkaaga. Hubi inaad u ogaysiiso taageerayaashaada wakhti ka hor inaad wadi doonto fadhi toos ah, si ay gacan uga geystaan ​​faafinta ereyga oo aad kor ugu qaadi karto tirada daawadayaashaada. Markaad ku aragto adiga ama qof ka tirsan shirkaddaada oo hadlaya ama muujinayo shay waa hab wax ku ool ah oo lagu dhiso kalsoonida iyo inaad weji gadaasha ka dhigto astaantaada.
Siyaabo badan oo bilaash ah oo kor loogu qaado akoonkaaga Instagram
Xeeladahan ugu dambeeya (laakiin aan ugu yarayn) waxa ka mid ah in dhagaystayaashaada laga dhigo kuwo casri ah, ku biirista wada sheekaysiga caanka ah ee ka dhaca Instagram iyo meelo kale, iyo (haddii aad ku jirto) xayaysiis. Bal aan eegno.
19. Ku dhawaaq cusbooneysiinta iyo xayeysiinta iibka
Haddii aad waddo nooc kasta oo iib ah ama heshiis, bilaabaya a badeecad ama adeeg cusub, ama aad rabto in aad ku dhawaaqdo in shay caan ah uu soo noqday, ku dheji kuwan boggaaga Instagram-ka ama Sheekada. Marka macaamiisha iyo taageerayaashu ogaadaan inaad u isticmaasho kanaalkan si joogto ah macluumaadka aan la seegi karin, waxay si joogto ah u eegi doonaan quudintaada waxayna u badan tahay inay la wadaagaan akoonkaaga kuwa kale oo ay ogaadaan inay rabaan inay ogaadaan.
Ka digtoonow inaadan ku yeelan qoraallo xayaysiin ah oo aad u badan quudintaada, tani miyay saamayn buuxda ku yeelan kartaa dhagaystayaashaada.
20. Ka faa'iidayso isbeddel
Isagoo ka hadlaya isbeddellada, kuwan waxay noqon kartaa qalab awood leh oo lagu horumarinayo akoonkaaga Instagram. Isbeddelku wuxuu noqon karaa shay fudud sida isticmaalka muuqaal cusub oo Instagram ah, sida madadaalo leh sida samaynta caqabadii ugu dambeysay ee fayraska, ama sida samafalka sida taageeridda isbeddellada bulshada.
Soo saarista qoraalada dhadhanka iyo tayada leh ee ku saabsan mawduucyada isbeddelaya waxay u badan tahay inay keento in taageerayaashaadu ay dib ugu soo daabacaan shabakadooda, ballaariyaan gaaritaankaaga xitaa ka sii caawinta xoojinta qiyamka asaasiga ah ee astaantaada. Ha ilaawin inaad isticmaasho hashtagyada la xidhiidha!
Habka aan sidaas xorta ahayn ee kor loogu qaado akoonkaaga Instagram
Aan ka hadalno Xayaysiinta Instagram. Maya, tani maaha xeelad bilaash ah, laakiin weli halkan ayaan ku darayaa sababtoo ah haddii aad u dejiso ololahaaga si sax ah, waxaad akoonkaaga ka heli kartaa dad aad u badan oo weli aad loo bartilmaameedsaday oo aan si kale u ogaan karin inaad jirto - iyadoo sidoo kale wadista hogaanka iyo dakhliga. Waxoogaa faa'iidooyin badan oo orodka ah xayeysiisyada Instagram ee weyn:
Sababtoo ah kuwani waa xayeysiis muuqaal ah, waxaad u horumarin kartaa ganacsigaaga dhagaystayaashaada hab dhadhan leh waxay dhistaa wacyiga sumadda isla markaa.
Xayeysiisyada Instagram inta badan waxay u eg yihiin qoraallo joogto ah. Tani had iyo jeer maaha wax wanaagsan, maadaama isticmaalayaashu ay inta badan dareemi karaan inay ku khiyaameen inay gujiyaan xayeysiiska, laakiin marka loo eego khibradda isticmaalaha, waxay ka dhigaysaa waayo-aragnimo quudin-wareejin badan.
Adiguna waad carari kartaa Xayeysiiska Sheekada Instagram ama isticmaal Dukaanka Instagram haddii aad haysato miisaaniyada xeeladaha dalacsiinta ee lacag bixinta ah.
Bilow kor u qaadida akoonkaaga Instagram hadda
Hadda oo aad hayso fikrado ku saabsan sida kor loogu qaado akoonkaaga, maxaad u samayn weyday qorshe? Dooro mid ama dhowr ka mid ah xeeladahan iyo waqti go'an, deji yoolal la qiyaasi karo, oo arag faa'iidooyinka la taaban karo.
Kor u qaadida akoonkaaga Instagram-ka waxay kaa caawin doontaa inaad dhisto dhagaystayaal tayo leh oo ka faa'iidaysan kara alaabtaada iyo adeegyadaada, laakiin sidoo kale ku siin kara jawaab celin faa'iido leh oo faafin karta ereyga ganacsigaaga. Ka-qaybgalka noocan oo kale ah ayaa ugu dambeyntii kaa caawin doona inaad ku guulaysato kalsoonida iyo macaamiil badan iyada oo loo marayo istaraatiijiyada suuq-geynta ee Instagram. Khiyaamadu waa in aad samirto oo aad la socoto dadaalkaaga iyo waxa ku jira, wakhti ka dib waxaa lagugu abaalmarin doonaa joogitaanka warbaahinta bulshada ee xooggan iyo koritaanka joogtada ah.
Xayeysiiska Google wuxuu yareynayaa Muuqaalada Shuruudaha Raadinta
Sida Loo Dhoofiyo Macaamiisha WooCommerce